Momba anay - Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd.
Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. dia orinasa ha-teknolojia manokana amin'ny famokarana sy fivarotana fitaovam-piarovana, vokatra EOD, vokatra famonjenaAfaka famotopotorana heloka bevava, sns.
Ny birao lehibe dia any Beijing, renivohitr'i Sina. Misy 400 metatra toradroa mampiseho efitrano misy fampirantiana akaikin'ny karazana vokatra sy fitaovana efa an-jatony. Ny orinasa dia ao Lianyungang, faritanin'i Jiangsu. Manangana ivon-toerana R&D any Shenzhen koa izahay. Ny ekipanay dia matihanina ara-teknika sy mpitantana mahay rehetra mba hanomezana tolotra mahafa-po ny mpanjifa. Miaraka amin'ny valin'ny paikadim-pirenena ho an'ny fampandrosoana "One Belt and One Road" (OBOR), dia namorona maso ivoho izahay tany amin'ny firenena 20 mahery. Ny vokatray dia misy fangatahana be ao an-trano sy any ivelany.
Ny vokatra sy fitaovana lehibe nanamboarana anay dia toy izao
Fitaovana fanaraha-maso momba ny fiarovana
Detector explosive azo entina, Scanner X-ray azo entina, Detector Liquid loza, Detector Junction non-linear sns.
Fitaovana fanoherana ny fampihorohoroana sy ny fanaraha-maso
Jammer UAV tànana, Jammer UAV raikitra, Rafitra fanadihadiana amin'ny alina ambany hazavana, fihainoana amin'ny alàlan'ny rafitra Wall.
Robot EOD, EOD Jammer, Palitao fanariana baomba, Kitona Hook ary Tsipika, EOD Telescopic Manipulator, Mine Detector sns.
● Ambony mpanjifa
Manome serivisy mihoatra ny sandan'ny tsena sy ny andrasan'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fanarahana ny foto-kevitra hoe "Ny fahafaham-ponao, ny faniriako" hahatratra ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa rehetra.
●Miorina amin'ny olombelona
Ny mpiasa no loharanon-karena sarobidy indrindra amin'ny orinasa iray. Ny fanoloran-tena hanaja ny fahalalana, hanaja ny olona ary hamporisika sy hanampy ny fampandrosoana ny tsirairay.
●Ny fahamendrehana aloha
Ny fahamendrehana dia fepetra mialoha ho an'ny orinasa hitazonana ny toerany sy ny fampandrosoana; Ny fitandremana ny teny fikasana no fitsipika fototry ny fitantanana ny fiasanay.
"Ny fiasan'ny fombafomba dia ny firindrana" no politika hiatrehana ny raharaha. Ny orinasa dia mangataka ny mpiasa rehetra hanamafy ny fiaraha-miasa ary hiatrika ny fifandraisana amin'ny mpamatsy, ny mpanjifa, ny mpiasa ary ny antoko hafa mifandraika amin'ny fiheverana mirindra.
Ny orinasa dia mangataka amin'ny mpiasa hanao ny tsara amin'ny fomba mety, mandrefy ny fahombiazan'ny orinasa amin'ny alàlan'ny fahombiazany ary mamporisika ny mpiasa handroso bebe kokoa ary hamorona fahombiazana avo lenta.
Ny tsy miovaova, lalina ary tsy miolakolaka dia fihetsika ataon'ny mpitondra sy ny mpiasa mpanatanteraka.
Rafitra fitiliana fiarovana X-Ray azo entina, Fakan-tsary fakan-tsary, Fitaratra fitiliana fiara, Rafitra fizahana fiara fitaterana finday, Masinina scanner X-Ray azo entina, Scanner X-Ray Portable,